महाभारतका दुई रोचक प्रसंग र कोरना (COVID-2019) को उपचार ! | Namuna Nepal
गृहपृष्ठ महाभारतका दुई रोचक प्रसंग र कोरना (COVID-2019) को उपचार !
महाभारतका दुई रोचक प्रसंग र कोरना (COVID-2019) को उपचार !
विदुर धृतराष्ट्रको राजसभामा प्रधानमन्त्री भएता पनि भतिजा पाण्डवप्रति पनि उनको अपार स्नेह थियो । दुर्योधनले पाण्डवहरुलाई नियमित रुपमा गर्ने दुराचारबाट विदुर संधै दुखि रहन्थे ।
दुर्योधनले पुरोचन नामको कालिगढ़ द्वारा पाण्डवहरुकालागि ‘वारणावत’ क्षेत्रमा अति सुन्दर महल बनाउन लगायो- लाक्षा गृह (लाहाको घर)। यो महल निर्माणमा अत्यन्त ज्वलनशील सामाग्री प्रयोग गरिएको थियो । पाण्डवहरुलाई त्यस महलमा बस्न पठाएपछि जंगलमा आगो लगाईदिएर उनीहरुलाई सखाप पार्ने दुर्योधनको योजना थियो । राज महलमा हुदैं गरेको यो षड्यंत्र थाहा पाएर बिदुर निक्कै चिन्तित थिए । तर यसको जानकारी पाण्डव समक्ष सहजै पुर्याउन उनको नैतिकताले दिदैनथ्यो, आखिर धृतरास्ट्रको नुन जो उनले खाएका थिए । प्रसंगबस एकदिन युधिष्ठिरलाई उनले सोधे- जंगलमा भयंकर डढेलो लाग्यो भने कुन चाहिं जनावर जीवित रहला ? युधिष्ठिरले जवाफ दिए- जंगलका राजा सिंह, तेज गतिमा दौडने हरिण-मृग,बिशाल शरीरका हात्ती आदि सबै आगोमा जलेर खरानी हुनेछन । तर आफ्नो घरभित्र दुलोमा चुपचाप बस्ने मुसाहरु भने सुरक्षित रहनेछन । डढेलोको महामारी सकिएपछी उनीहरुको दिनचर्या पूर्ववत रुपमा पुन: सुरु हुनेछ । ज्ञानी युधिष्ठिरले विदुरको सांकेतिक भाषा बुझी हाले र सोहि अनुरुप बन्दै गरेको लाक्षा गृह मुनी गुप्त रुपमा सूरुंग बनाउन थालियो । लाक्षा गृहमा लागेको आगो जगंलभरि फैलियो । आगोमा डढेर पुरोचन आफैं पनि मारियो । जंगलमा डढेलोको महामारी फैलिएर धेरै जीवजन्तु मरे तर पाण्डवहरु भने सुरुंग मार्फ़त सुरक्षित रहन सफल भए ।कोरोना भाइरसको डढेलो लागेको छ पृथ्वीमा अहिले ! माथिको प्रसंगबाट यहाँहरुले बुझी हाल्नु भयो होला अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित रहन हामीले के उपाय अपनाउनु पर्छ भनेर । बुझ्नेलाई किन धेरै व्याख्या, विज्ञेशु किम अधिकम….. ?
पछिल्लाे - स्पेनको अवस्था थप नाजुक,एकै दिनमा ५०० जनाको मृत्यु
अघिल्लाे - पोर्चुगलको क्वाइरेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई अवैतनिक वाणिज्य दूतावास,एनआरएनए लगायतका प्रतिनिधिद्वारा भेट